3 Jọn 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jọn Nke Atọ 1:1-14
Ekele na ekpere (1-4)
Jọn jara Gayọs mma (5-8)
Dayotrefis na-achọ ịbụ onye mbụ (9, 10)
A kọrọ akụkọ ọma banyere Dimitriọs (11, 12)
Jọn na-atụ anya ịga hụ Gayọs; ekele mmechi (13, 14)
1 Gayọs, onye m hụrụ n’anya, onye m hụrụ n’anya n’eziokwu, mụnwa bụ́ okenye* na-edetara gị akwụkwọ ozi. 2 Onye m hụrụ n’anya, m na-ekpe ekpere ka ahụ́ na-agbasi gị ike nakwa ka ihe niile na-agara gị nke ọma, otú ha na-agara gị* nke ọma ugbu a. 3 N’ihi na m ṅụrịrị nnukwu ọṅụ mgbe ụmụnna bịara kwuo* na i jisiri eziokwu ahụ aka ike. M na-aṅụrịkwa ọṅụ na ị na-eje ije n’eziokwu ahụ.+ 4 E nweghị ihe na-eme m obi ụtọ karịa ihe a: na m ga-anụ na ụmụ m nọgidere na-eje ije n’eziokwu ahụ.+ 5 Onye m hụrụ n’anya, ihe ị na-emere ụmụnna, n’agbanyeghị na ị maghị ndị ha bụ,+ gosiri na i jisiri Chineke aka ike. 6 Ha akọọrọla ọgbakọ* banyere ịhụnanya gị. Biko, mgbe ha na-ala, gbalịa nyere ha aka otú ga-adị Chineke mma.+ 7 N’ihi na ọ bụ maka aha ya ka ha ji gawa izisa ozi ọma n’anaghị ndị mba ọzọ ihe ọ bụla.+ 8 N’ihi ya, anyị kwesịrị ịnabata ụdị ndị a nke ọma,+ ka anyị wee bụrụ ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ n’ịkwado eziokwu ahụ.+ 9 E nwere akwụkwọ ozi m detaara ọgbakọ, ma Dayotrefis, onye na-achọ ịbụ onye mbụ n’ime ha,+ anaghị akwanyere ihe ọ bụla si n’aka anyị ùgwù.+ 10 N’ihi ya, ọ bụrụ na mụ abịa, m ga-eme ka a mata ọrụ ndị ọ na-arụ, na ọ na-akọsa ihe na-abụghị eziokwu* banyere anyị.+ Nke a ezughịrị ya. Ọ naghịdị anabata ụmụnna+ nke ọma. Ọ na-agbalịkwa igbochi ndị chọrọ ịnabata ha, na-achụpụkwa ha n’ọgbakọ. 11 Onye m hụrụ n’anya, esola ndị ọjọọ na-eme ihe ọjọọ, kama soro ndị na-eme ihe ọma mewe ihe ọma.+ Onye na-eme ihe ọma si na Chineke.+ Onye na-eme ihe ọjọọ ahụbeghị Chineke.+ 12 Ha niile kọrọ akụkọ ọma banyere Dimitriọs, eziokwu ahụ gbakwaara ya àmà. N’eziokwu, anyị na-ekwukwa okwu ọma banyere ya.* Ị makwa na ihe anyị na-ekwu* bụ eziokwu. 13 E nwere ọtụtụ ihe m chọrọ ịgwa gị, ma achọghị m iji mkpịsị akwụkwọ na ịnk na-edere gị ha. 14 Ma, enwere m olileanya na m ga-ahụ gị n’oge na-adịghị anya, anyị ga-ekwukwa okwu ihu na ihu. Udo dịrị gị.+ Ndị enyi anyị na-ekele+ gị. Keleere m+ ndị enyi anyị n’otu n’otu.
^ Ma ọ bụ “agadi nwoke.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi gị.”
^ Na Grik, “gbaa àmà.”
^ Na Grik, “agbaarala ọgbakọ àmà.”
^ Na Grik, “na-ekwu okwu ọjọọ.”
^ Na Grik, “anyị na-agbakwara ya àmà.”
^ Na Grik, “àmà anyị na-agba.”
3 Jọn 1